अबदेखि सार्वजनिक सवारी साधनमा यात्रा गर्दा, भाडा दिँदा पैसा तिर्नु नपर्ने ! – Life Nepali
अबदेखि सार्वजनिक सवारी साधनमा यात्रा गर्दा, भाडा दिँदा पैसा तिर्नु नपर्ने !
काठमाडौँ । अबदेखि सार्वजनिक सवारी साधनमा यात्रा गर्दा पैसाको कारोवार नहुने भएको छ । पैसाको कारण कोरोना सर्ने जोखिम भएका कारण अब खल्तीमा पैसा बोक्न नपर्ने भएको हो । विद्युतीय भुक्तानीको प्रयोग बढ्न थालेपछि सार्वजनिक यातायातहरू कार्डबाट भाडा लिने व्यवस्था गर्न लागेका छन् । कोरोना विषाणुका कारण पनि यो नयाँ पद्धति प्रभावकारी हुने देखिएको छ । ***थप भिडियो” हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोस’,
पैसाबाट पनि कोरोना विषाणु सर्नसक्ने सम्भावनाले नगदमा भाडा सङ्कलन गर्दा हुनसक्ने सम्पर्क न्यून गर्न कार्डबाट भुक्तानी प्रणाली उपयोगी हुने देखिएको छ । साझा यातायातले यसअघि नै कार्डबाट भाडा लिन सुरु गरिसकेको छ । त्यस्तै एनएमबी बैङ्कले किपु बस सेवासँग सहकार्य गरी विद्युतीय भुक्तानीको प्रबन्ध मिलाउने सम्झौता गरिसकेको छ । आइतबारदेखि सुन्दर यातायातले विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली ९डिजिटल पेमेन्ट सिस्टम० सुरु गर्ने र त्यसका लागि मेसिन जडान गर्ने भएको छ ।
योसँगै पेमेन्ट कार्ड लिएर गाडीमा रहेको मेसिनमा पठाएपछि कार्डमा रहेको पैसाबाट गाडी भाडा तिरिन्छ । सुन्दर यातायात प्रालिले ई–सेवा र चाइनाको बीएके कम्पनीको सहकार्यमा विद्युतीय भुक्तानी मेसिन जडान गर्न लागेको जनाएको छ । सुन्दर यातायातको २५ वटा गाडीमा आइतबार मेसिन जडान गरिने प्रालिका अध्यक्ष भेषबहादुर थापाले जानकारी दिए । उनका अनुसार अन्य मेसिन ल्याउने क्रममा छन् ।
Previous लकडाउनले गर्दा नेपालमा ह्वात्तै घट्यो जग्गाको मुल्य !
Next आज पनि घट्यो सुनको मुल्य !